Arsenal iyo Napoli oo ka haray tartanka Horyaalka Yurub kadib markii garoomadooda lagu xasuuqay · Jowhar.com Somali News Leader
Arsenal iyo Napoli oo ka haray tartanka Horyaalka Yurub kadib markii garoomadooda lagu xasuuqay
by mahad | Tuesday, Mar 7, 2017 | 2493 views
March 7 (Jowhar)— Kooxaha Arsenal iyo Napoli ayaa ka haray tartanka horyaalka Yurub kadib markii koox walba garoonkeeda loogaga dhaliyay goolashii lugtii hore loogaga soo badiyay garoomada ay martida ku ahaayeen.
Arsenal ayaa 5-1 lugtii labaad laga dhaliyay iyadoo isugeyn 10-2 ay ugaga adkaatay labadii kulan naadiga Bayern Munich.
Goolka kaliya ee ay dhalisay ayaa waxaa u dhaliyay Arsenal Theo Walcott balse markii ciyaarta laga saaray Laurent Koscielny ayaa sidii daadka goolasha loogu fatahiyay. Arsenal ayaa ku haritaanka wareegga 16ka waxaa uu noqday kii 7aad ee isku xigta oo lagu reebo tartanka horyaalka Yurub.
Robert Lewandowski ayaa goolka u horeeyay u dhaliyay Munich kaas oo ahaa rigoore halka goolasha kalana min gool dhaliyay Arjen Robben iyo Douglas Costa halka uu labo gool ka dhaliyay Arturo Vidal.
Dhinaca kale Real Madrid oo marti u ahayd Napoli ayaa ku celisay goolashii ay ku soo dhalisay garoonkeeda waxayna ku badisay 3-1 halka isku darka labada kulana uu ka noqday 6-2.
Sergio Ramos ayaa labo gool u dhaliyay naadigiisa hase yeeshee goolka waxaa ku hormartay Napoli oo uu Dries Mertens hogaanka u dhiibay kooxdiisa qeybtii hore ee ciyaarta.
Napoli ayaa soddonkii daqiiqo ee ugu horeysay ciriiri gelisay Real Madrid waxaana xaalada ay ku sii xumaatay markii goolka loogaga hormaray Real Madrid. Hase yeeshee labo gool oo isku xiga ayaa waxaa dhaliyay daafaca Real Ramos kaasoo ay kooxu ku baxsato kulamada adadag.
Ronaldo ayaa kulankiisii lixaad ee Horyaalka Yurub gool la’aan noqday halka uu Morata daqiiqadii u dambeysay goolkii 3aad u dhaliyay kooxda Real Madrid.